दलीय पु्रण समानुपाितक िनर्वाचन र बन्दुकधारी मधेसी समुहहरूसँग अादरपु्रवक शान्ित वार्ता नगरे अप्िरलमा िनर्वाचन नै हुन निदने अडान महन्थ ठाकुरले िलनुभएको छ। त्यसको समर्थनमा मैले दुई शब्द बोलें पिन: मधेसी जनजाित अान्दोलनकालािग दलीय पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनको अावश्यकता । तर त्यसपिछ मैले िवचार गरें र मलाई लाग्यो मधेसी जनजाित अान्दोलनकालािग त्यो सबैभन्दा राम्रो बाटो नहुन सक्छ।
अिहलेको व्यवस्थामा थुप्रै कमी कमजोरी छन्। ६०१ जनाको पिन कहीं संसद हुन्छ नेपाल जस्तो सानो देशमा? समानुपाितकको फर्मुला बुझी नसक्नु छ। िनर्वाचन क््षेत्र िनर्धारण गर्दा बखेडा हुन्छ। तर मधेसी र जनजाित अान्दोलन हुनुभन्दा अगािड अप्िरल क्रान्ित हुनुपर्यो। त्यसको कारण के त? भन्दा खेरी शक्ित भनेको लोकतन्त्रमा मतदाताकोमा हुन्छ। अब जाने भनेको जनतामा हो।
भने पिछ गर्ने के?
नेपालमा तीन करोड जनसंख्या छ। त्यसमध्ये डेढ करोड मतदाता होलान्। त्यस मध्ये एक करोडभन्दा बढी मधेसी र जनजाित छन्। लक्ष्य भनेको ती एक करोड मतदातालाई मधेसी र जनजाित अान्दोलनको पक्षमा मत खसाल्न लगाउनु हो।
तराई मधेस लोकतान्त्िरक पार्टी, सद्भावना, अानन्दी, फोरम, फोरम िवश्वास गरी पाँच प्रमुख पार्टी छन्। िकशोर िवश्वासको नेतृत्वमा रहेका िविभन्न दिलत त पहाडका जनजाित पार्टी छन्। यी सबै पार्टीका केन्द्रीय स्तरका नेताहरूको संख्या मुश्िकलले ५०० होला। त्यो पिन नहोला। यी ५०० व्यक्ितले ती एक करोड मधेसीको व्यवहार बदल्न खोिजरहेका छन्।
हजार िबघा जग्गा जोत्न चाहनेले पिहला एक िबघा जग्गा जोतेर देखाउनुपर्छ। एक करोडको व्यवहार बदल्न चाहनेले पिहला ५०० को व्यवहार बदल्न सक्नुपर्छ।
गर्नुपर्ने के त? गर्नुपर्ने भनेको यी सम्पुर्ण पार्टीहरूको एकीकरण हो।
नाम चािहयो। सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ राजेन्द्र महतोको पार्टीको नाम, दुई शब्द: सद्भावना पार्टी। मधेसी जनजाित अान्दोलनको अगुवा नाम त्यही हो। नाम सद्भावना भएपिछ राजेन्द्र महतोले नाम पाए। उनले पार्टी अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पद पाउने कुरा अाउँदैन।
अानन्दी देवीलाई सर्वमान्य नेता बनाउने। पद हुन्छ, पावर केही पिन हुँदैन। मिहला पिन हो। मधेसी जनजाित मिहलालाई राम्रो सन्देश पिन पुग्छ।
पार्टी अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर। नेपाली काँग्रेसको सहायक महामन्त्री रिहसकेका पिरपक्व व्यक्ित। चुनावपिछ प्रधानमन्त्री पदको दावेदार।
उपाध्यक्ष पदमा िकशोर िवश्वास। अाफ्नो नेतृत्वमा रहेका सबै पार्टीहरूलाई ल्याउने शर्तमा। तराईको सबैभन्दा ठुलो समुह थारू नै हो। त्यस कारण पिन।
महामन्त्री पदमा उपेन्द्र यादव। सुजाताले दुई चार पटक ठगेको मान्छे भए पिन मधेसी क्रान्ितले पैदा गरेको व्यक्ित हुन् यादव। थारू पिछ तराईमा यादवकै बाहुल्य छ।
प्रवक्तामा सिरता िगिर। मिहलालाई अगािड ल्याउनै पर्छ। नत्र अप्िरल क्रान्ितपिछ मधेसी क्रान्ित भए जस्तै मधेसी क्रान्ितपिछ मिहला क्रान्ित हुन्छ।
दोस्रो उपाध्यक्षमा िकशोर िवश्वासको रेकमेन्डेशनमा एक जना पहाडको जनजाितलाई ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
तेस्रो उपाध्यक्षमा एक जना दिलतलाई ल्याउनुपर्ने हुन्छ। िवश्वास समुहमा एउटा दिलत पार्टी छ क्या रे। त्यसै पार्टीको अध्यक्षलाई ल्याउँदामा हुन्छ।
यी भए सात जना। त्यसमा चार जना थप्ने अिन त्यो भयो पोिलट्ब्युरो। ती ११ जनामा २२ जना थप्ने, ती ३३ जना भए केन्द्रीय सिमित सदस्य। ती ३३ पदमा नअटाएका तर अिहले एकीकरण हुनु अगािड िविभन्न पार्टीका केन्द्रीय सिमितमा रहेका सबै जना तत्काललाई एकीकृत पार्टीको महासिमित सदस्य हुने भए।
त्यसपिछ िजल्ला स्तरमा एकीकरण हुनुपर्यो। ३३ जनाभन्दा बढी िजल्ला सिमितमा पिन हुँदैन। मधेसी क्रान्ितमा शहीदहरूले ज्यानको अाहुित िदए। जाबो पद त कुन ठुलो कुरा हो र?
गाउँ र नगर स्तरमा पिन एकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपिछ।
अिन चुनाव अगािड एउटा महािधवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। बस्। त्यित। बाँकी काम जनताले अाफ्सेअाफ गर्ने छन्।
बन्दुकधारी मधेसी समुहहरूसँग खुसुक्क शान्ित वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। गोइतजीले अलग देशको कुरा छाड्नैपर्ने हुन्छ नत्र भने वहाँलाई माइनस गरेर अगािड बढ्नुपर्ने हुन्छ। अलग देशको नारा त बीसौं शताब्दीको नारा हो। एक्काइसौं शताब्दीमा त्यो लागु हुँदैन। जनकपुरबाट काठमाण्डु प्लेनमा जान सिकन्छ। होइन म त िहंडेरै जान्छु भनेर भन्नुको के तुक छ? नेपालमा संघीय गणतन्त्रको स्थापना हुन्छ, मधेस राज्यको स्थापना हुन्छ, अिन त्यसपिछ हुने भनेको दक्िषण एिसयाको अार्िथक एकीकरण हो, युरोपमा जस्तो। भारत र चीनले दुई देशबीच free trade area स्थापना गर्ने िनर्णय गिरसके। नेपाललाई त्यसमा समािहत गर्नुपर्ने हुन्छ।
बन्दुकधारी मधेसी समुहहरूले चुनावसम्मकालािग सीजफायर गर्ने, एक मधेस एक प्रदेशको नारामा अाउने, र सद्भावना पार्टीलाई चुनावमा नैितक समर्थन गर्ने। चुनावपिछ सद्भावना सत्तामा जान्छ। अिन ती सबै समुहहरूसँग अादरपुर्वक शान्ित वार्ता गर्छ।
चुनावमा जाँदा सद्भावनाले एउटा पुर्ण संिवधान नै िलएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो पिन मैले लेिखिदया छु। मैले लेखेको संिवधानले नेपाललाई दुिनयाको नम्बर एक लोकतन्त्रको रूपमा स्थािपत गर्ने छ।
म व्यक्ितगत त चुनाव ताका अाउन सक्िदनँ तर मेरा भाषणहरू िभिडयो भएर अाउने छन्। म यहाँ न्यु यर्कमा बसेेर बराकलाई पिन मद्दत गर्नुपर्ने छ। अमेिरकामा पिन म मधेसी नै हो। यहाँ पिन अान्दोलन जारी छ।
This is almostanonsense blog...seems that you are trying to break up your country in favour of INDIA...!